U-Alexandra Panayotova: ubomi bomntu siqu 2017, i-Eurovision kunye nezwi - i-Biography ye-Panayotov: umfazi, u-gay, u-Instagram
U-Alexander Panayotov, njengeentaka zePhoenix, "wandisa amaphiko akhe" kwi-Olympus yokudala. Kwaye kwakhona iifestile zixhala malunga nombuzo: ingaba kukho umfazi ePanayotov okanye ingumlingani? Yintoni entsha eyenzekayo ebomini bodumo ngexesha lokuthula, yintoni entsha eyenzekayo ngoku ebomini bomntu womculi? Ziziphi iindaba zakutsha ezivela ePanayotov? Kwaye kwabonisa njani ukuba "i-Golos" inika "ukuqala ebomini" entsha kwiinkwenkwezi eziqhambileyo zaseRashiya? Ngaba uAlexander Panayotov uya kumela iRussia kwi-Eurovision Song Contest ngo-2017?
U-Alexander Panayotov nobomi bakhe-2017: inyaniso kunye namahemuhemu
"Ndifuna unyana!" - le ngxelo emfutshane kwi-Twitter yakwazi ukwenza inzondo enkulu phakathi komkhosi wabalandeli be talente lika-Alexander Panayotov. Yintoni eya kuthetha ntoni? Ngubani na yena - umama ongaqondakaliyo wendodana yenkwenkwezi? Kwaye, mhlawumbi, u-Panayotov unomfazi, "umculi wesizwe" efihla amehlo akhe? Kungakhathaliseki ukuba yintoni, kodwa iifoto ezintle kunye nomphathi we-PR, iinkwenkwezi zokuqala kunye nabantu abangaziwayo, kwi-Instagram Panayotov ngokwaneleyo. Ngoko abalandeli bayazibuza ngobomi bomntu obuthile bezithixo zabo nokuba ngaba unobungozi? Okanye ibinzana malunga nendodana yakhe - nje ukunyuka kwe-PR?
U-Alexander Panayotov noPolina Gagarina
U-Alexander Panayotov kunye ne-blonde eyimfihlakalo
U-Alexander Panayotov noYulia Nachalova
Ngoko ngubani na yena - intombazana enhle kunye nomfazi ozayo ka-Alexander Panayotov? Blonde okanye brunette? Slender okanye ngeefom ezintle? Famous okanye akunjalo? Umdlali we-actor ngokwakhe - malunga nazo zonke iintlobo zezakhelo kunye neemplates kwaye uchaza uthando lwakhe lwesikhathi esizayo:
"Intombazana efanelekileyo yintombazana ehlakaniphile. Ndiqinisekile ukuba ubuchopho buyingxenye yecandelo lomzimba. Ukubonakala kwam kubalulekile. Blonde, brunette okanye obomvu - akunandaba. Andikwazi ukuthetha ukuba ndingumfana wamantombazana onomfanekiso wokubonakala. Kuyinto enhle xa iqabane lakho lilungele kakuhle ... "
U-Alexander Panayotov ukususela esemncinci wayejikelezwe ngamantombazana amhle
Ngoko, uNyaka omtsha-2017 uAlexander Panayotov wahlangana omnye, ngaphandle komhlobo othembekileyo wobomi. Nangona, iilwimi ezimbi azipheli ukuphindaphinda oko, kubonakala ngathi, umculi usengongqingili kwaye uyafihla le nyaniso. Kodwa umdlali wezilwanyana ngokwakhe uhlasele ukuhlaselwa okunjalo ekukhokelweni kwakhe nobutsha kwaye unikeza abahlalutyi abanobungozi impendulo ecacileyo necacileyo:
"Andiyindoda. Ndiyakuthanda abafazi kwaye ndibabethele abafazi. Indoda, akayi kuthathwa njengenene ukuba uyayingqingili ... "
Kwaye kubungqina buzisa iingoma zakhe zothando kunye neengxondorha kunye nabasetyhini abanobuhle kunye nabanalwazi abanamakhono aseRashiya. ULarisa Dolina, uSasha Spielberg ... Baye batshatyalaliswa, bashayiswa kwindawo leyo, ilizwi elihle lika-Alexander Panayotov. Kodwa, njengoko kuyaziwa, kuyo nayiphi na imingxube yobusi kukho i-fly in the ointment. I-"tar" yayiyintetho engxamisekileyo yongxoxo kunye nomculi womculi kwi-workshop yokudala kunye neyokuphumelela kwiprojekthi "Umculi Wabantu" uAlexander Goman. Le nsizwa, ehleli iinyanga eziliqela ngapha nangapha kunye nePanayotov, yayithetha ngengqondo yakhe engafanelekanga kunye nazo zonke iintlobo zokuzilungisa.
"USasha, uyabona, konke kuyanconywa. Ulusu lwakhe luvelvety. Uyintombazana yokwenene. Wayesoloko endigxeka: "Goman, ukuba uya kuba ngumculi, kufuneka ube mnandi kwaye ulungile." Kwaye ekugqibeleni wangifundisa ukusebenzisa le nkunkuma. Ngoku ndikulungele ukuthenga oku ... njengaye ... isiseko. Andiyi kuwela kwaye ndiyenze. "
Umgcini wokugqibela wexesha lokugqibela lomdlalo "Izwi" aliphiki le nyaniso. Ngaphezu koko, uAlexander ucinga ukuba kuyinto eqhelekileyo ukuzinyamekela. Emva koko, ukubonakala komculi "yakhe yonke into"! Yaye uyavuma ngokuqinisekileyo ukuba akayi kuze afike kwisigaba, ngaphandle kokusebenzisa i-cream-frequency cream ngaphambili. Kodwa ngokuphindaphindiweyo ugxininisa ukuba le nto ayithinteli nayiphi na indlela yokuziphatha kwakhe ngokwesondo.
U-Alexey Goman wenza izihlobo kunye noPanayotov kwiprojekthi ethi "Umculi wabantu"
Ii-biographies zomculi kunye neendaba zamva nje uAlexander Panayotov
Umntu owayengumdlaleli wolu boniso "Umculi wabantu" akudala ukuba wonke umntu akhulume ngaye. Isizathu salokhu kukuthatha inxaxheba kuka-Alexander Panayotov kwi-"Voice Voice", apho kwinqanaba lokuphicothwa kwempumputhe kubo bonke ootitshala abane baphendukela kumculi. Impumelelo enjalo kulula ukuyichaza! U-Alexander Panayotov wenza ngokukrakra okufanayo "Yonke yedwa", eyaba yinto ephawulekayo yembali yehlabathi yomdlalo we-pop u-Celine Dion. Ngomqeqeshi weenkwenkwezi uGrigory Leps, u-Panayotov wakwazi ukufikelela ekugqibeleni ... apho aphinde afike khona kuqala. Kodwa malunga ne karma "soloko unombolo 2" kamva kamva. Ngeli xesha, uAlexandro ekulweni olude kunye nenkani enomculo wokucula olahlekelwe ngumfundi kaLeonid Agutin Daria Antoniuc. Nangona kunjalo, ingoma ethi "Invincible" ngoku i-arsenal ye hero yethu. Iqopu yoma ngoma yafakwe kwisinye sezixeko ezizithandayo zomculi, eNew York. Emva kokubhengezwa kweziphumo zokugqibela, u-Alexander Panayotov, nangona wayeyindoda elungileyo, kodwa kwacaca ukuba wayidumise njani umculi kwindawo yakhe yesibili. Nangona kukho ukukrakra kokutshatyalaliswa kwintengiso ethi "Izwi", umntu unokuthetha ngokuzithemba: umboniso ophezulu kunye ophumelelayo womculi u-Alexander Panayotov wenzeka! Kukho amaxesha athile amaxwebhu athengiswayo kubumbano! Ngoko, umzekelo, iikonti yangasese yama-40 yangasese yasePanayotov ngoku ixabisa ama-ruble ayi-600 ukuya kuma-700. Kwaye ukusebenza kweNtshonalanga-ka-2017 yonyaka omtsha kwabiza abantu abanomdla wokuvelisa umculi ukusuka ku-800 ukuya kwii-ruble ezigidi! Yaye le nto ayikwazi ukuvuyisa bonke abadumileyo kunye nabaphathi bayo. Okwangoku, ukuphinda kukhuthazwe kwakhona "uPanayotov wazibandakanya ngokugqithiseleyo iGrigory Leps, okanye endaweni yakhe yokuvelisa. Kwaye oku kuyintloko kwimpumelelo! Ngokukhawuleza, ngo-Matshi 8, uAlexandria Panayotov uya kunika ikhonsathi yakhe yokuqala ye-solo kwi-Crocus City Hall yaseMoscow. Isipho esikhulu kwiSuku lwaBafazi baMazwe ngamazwe! Okwangoku, inkwenkwezi ihamba ngokukhenkcezayo kwimpumelelo yayo kwiprojekthi "Voice". Kwaye, kubonakala ngathi, umculi ulahlile ngokupheleleyo ubomi bakhe, ubuncinane okwethutyana. Ukukhangela isigxina sakhe sesibini, uPanayotov akanalo ixesha - ixesha elinzima kakhulu lokubonakala, ukufowunelwa kunye nokuthatha inxaxheba kwimimiselo yomsakazo kunye neTV.
Umfazi ka-Alexander Panayotov: obani abafanele bawudlale kule nxaxheba?
Ukususela kwiminyaka yokuqala umculi uye wafumana udumo lwalo hlobo lwamadodakazi namadoda omama. Ukuthatha inxaxheba kwakhe kwi-"Artist's Artist" kwahamba kunye neenkcukacha ezithintekayo ebomini bomntu siqu kwiinkwenkwezi zokuqala. Ngoko, umzekelo, kukho amahemuhemu ukuba uAlexandria Panayotov wakwazi ukuguqula incwadana kunye nabini (!) Abathathi-nxaxheba beqela lamasetyhini "Assorti". NgoAnya Alina, uPanayotov wayenomdla wokwenene kwizithethe eziphambili ze-Latin American soap operas. Abantu abancinci, abangazange badideke, baxube baze bawanga ngokufudumele phambi komntu wonke. Enyanisweni, le ntombazana ayizange ikwazi ukugcina ulutsha olunothando olukufutshane naye.
UAnya Alina akazange abe ngumfazi ka-Alexander Panayotov
Olunye uvelwano, olubhekiswe kumculi, ludibaniswe negama lomculi u-Oksana Kozakova. Ngokuqinisekileyo, umculi osemncinci angenakho isimemo sokuza kutyelela intombazana kwaye ixesha elide lihlangene naye kwindawo yokuhlambela. Kwaye benza ntoni - abahlobo bakaKozakova noPanayotov baqiqa nje ... Ngendlela, u-Oksana naye uthatha inxaxheba kwixesha lesihlanu lomdlalo "Izwi". Enyanisweni, wayengenakuhamba ukuya kuAlexander.
UOksana Kozakova ungumculi onetalente kunye nomhlobo osondeleyo wePanayotov
Omnye umculi wesithandabukazi ebomini buka-Alexander - uJulia Nachalova. Ienkwenkwezi zithi zidibaniswe nobuhlobo obudala kunye obuqinileyo. Bayamemela imihla yokuzalwa baze badibane kunye nanjalo, "batye indebe". Nangona kunjalo, abalandeli abanomdla bayakubona kule nxulumano into engaphezu kohlobo nje. Ngokuqinisekileyo, uJulia Nachalova, kunye nomyeni wakhe, waphula ngenxa yomculi, owayekwazi ukuthetha kwakhona ngokukhawuleza. Yaye ke wonke umntu wayenomdla kakhulu kubhaliso kwi-Instagram Beginning phantsi kwesithombe esihlangeneyo kunye no-Alexander. "Intanda yam uPanayotov, uhlala kunye nam" - watsho. Khawuqikelele ngoku - ingaba luthando okanye nje ukunyuka kwe-PR?
UJulia Nachalova-mhlawumbi, umfazi wexesha elizayo lika-Alexander Panayotov?
Kwaye umdlali wexesha elide wayehlala nomculi omncinane kunye nelungu le "People's Artist" uJulia Valeeva. Enyanisweni, abantu abancinci bavuma ukuba akukho nto phakathi kwabo. Nangona kunjalo, uAlexandro uzitshitshisa ngenxa yokuba uJulia waqhekeza nomyeni wakhe, owakhawuleza wamvumela umfazi oselula ukuba akhe umsebenzi wokuhlabelela.
"Ukuba ucinga ukuba silala noJulia, uphosakele kakhulu ... andikaze ndibe nantoni na kwaye ayikwazanga. Singabantu abahlobo nje. Kwaye, njengomhlobo, ndincenga ukuba ahlale kunye ndide ade afumane izinto ngokufanelekileyo. U-Yulia e-Izhevsk wahlala engumfana omangalisayo uDima. Ngaphambi kokuba "Umculi Wabantu" bahlala ndawonye iminyaka emihlanu. Kwaye bagcina ubudlelwane bude kwithuba elithile. Ngelishwa, uDima akakwazanga ukuma ukuhlukana noJulia waza wamshiya. Ewe, wayenomona. Ndandisoloko ndivakalelwa ngandlela-thile uhlobo oluthile lokungathembeki kum ... "
UJulia Valeeva - intombazana okanye nje umhlobo ka-Alexander Panayotov?
Omnye umfama ongaqondakaliyo - uhlobo lweKaty Koreneva, umvelisi okhoyo wangomculi. Osemncinci, omhle kunye noqondayo - ungubani umfazi ofanelekileyo u-Alexander Panayotov? Kodwa kulo mcimbi udumo luhlala lungathuli. Kodwa ngubani na owaziyo-ngaba lo mdlalo uza kuqhuba umtshato osondeleyo?
Katya Koreneva - umlimi okhoyo u-Alexander Panayotov
U-Alexander Panayotov kunye ne-Eurovision Song Contest-2017
Ngoko ke, u-Alexander Panayotov kunye nomncintiswano wamazwe ngamazwe "i-Eurovision" badibaniswa ubudlelwane obude kunye nobunzima. Umculi akazange azame ukunqumla le ntlanzi, kodwa wayehlala ehlangene kwisigaba sokhetho lukazwelonke. Yaye eyona nto ihlaselayo, ihlala isondela kumgca wesibini wokugqibela. Ngethuba lokuqala, umculi wazama ukuxhoma kwisitimela se-Eurovision-2005 nomhlobo wakhe uAlexander Chumakov kunye ne-rattletrap Balalaika. Kodwa u-Natalia Podolskaya, ngokwembono yeJaji yaseRussia, wayengumfundi ofanelekileyo. Enyanisweni, njengokuba uyazi, i-Russia ekugqibeleni ithatha indawo yeshumi elinesibini kuphela, enokuthi ithathwa njengokungaphumeleli ngokupheleleyo. Kwesihlandlo sesibini uPanayotov wazama isandla sakhe kwi-Eurovision ngo-2008, kodwa waphinda wathatha indawo yesi-2 kuphela. Ngelo xesha wayedlula uDima Bilan, ekugqibeleni wazisa ukunqoba kwelanga lakhe elide. Nangona kunjalo, ukubunjwa "iCrescent and Cross", eyenziwa nguAlexandro, kwaye yaxabiswa ngabafundi kunye nabalandeli bomculi. "Ukuphulukiswa" ngamalungu ejury aseRussia abakhethiweyo abathathi-nxaxheba kwi-Eurovision, iPanayotov iya e-Ukraine. Enyanisweni, kwaye kwakukho umculi walinda kuphela isiphumo "sesilivere". Ngenxa yoko, uSvetlana Loboda ufumana ilungelo lokumela ilizwe kwilizwe jikelele. Yikuphi, nangona kunjalo, kwaye ayikwazanga ukubonisa umphumo ohloniphekileyo. Ngo-2010, u-Aleksandre ubonakala kwakhona kwisizwe saseRussia ukhetho, kodwa kwakhona, i-firefire! Ukubunjwa kweMaya Showtime kwakunobuthakathaka kunoma ingoma kaPeter Nalitch ethi "Ulahlekile kwaye Ulibalekile". Omnye wayeza kudala ezandleni zakhe aze ayeke ukwenza imizamo engaphumeleli, kodwa kungekhona yena ... Nantsi ingumphumo! Ngo-2017, u-Alexander Panayotov, ekugqibeleni, uya kumela iRashiya kwi-Eurovision Song Contest eKiev! Ukugqithisa ukhetho lwesizwe, ukhetho lwakhe luvunyiwe yi-jury yolwazi. Kubonakala ukuba, i-cambeck ephakamileyo eyayiqala ngomboniso othi "Izwi" alizange libonwe ngabantu abagunyaziwe ukuba bakhethe "abadlali abalungileyo" bebambiswano lwengoma yamazwe ngamazwe "I-Eurovision".
Inwele yakhe yokwandisa - ukutshintsha kwekhwele kunye nesithombe
Indlela yokwenza umntwana ngencwadi?
Ukupheka okulula kunye okumnandi ukuxhasa ukukhuselwa komntwana wakho